Posted by ဆန်းစနေ၀န်း at 3:19 PM No comments: Links to this post
Labels: ကဗျာ, သူတို့ကဗျာ
တစ်ခါ တစ်ခါ ဘဝခါး
(သက္ကလပ်ရတု အမှတ်တရ သူရေးတဲ့ကဗျာ)
Posted by ဆန်းစနေ၀န်း at 2:17 PM No comments: Links to this post
Labels: ကဗျာ, သူတို့ကဗျာ, အမှတ်တရနေ့ရက်များ
Posted by ဆန်းစနေ၀န်း at 3:20 PM No comments: Links to this post
Labels: ကဗျာ, ခံစားမိသည်များ
Posted by ဆန်းစနေ၀န်း at 12:14 PM No comments: Links to this post
စီးဆင်းခဲ့... စီးဆင်းမြဲ... စီးဆင်းအုံးမှာပါ....
ကလေးနှစ်ယောက်အမေ ရုံးတက်အလုပ်လုပ်ရသူတစ်ယောက်အဖို့ မနက်ခင်းတိုင်းရဲ့ စက္ကန့်တိုင်းဟာ တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်။ မနက် ကိုယ်အိပ်ရာထရင် သူတို့လေးတွေလည်း နိုးပြီး လိုပ်ထတတ်တာမို့ အလုပ်က သိပ်မတွင်ကျယ်လှပါဘူး။သူတို့ မျက်နှာသစ် သန့်ရှင်းရေးလုပ် ပြီးရင် ကဗျာသီချင်းဖွင့်ပြထားပြီး မနက်စာအတွက် စီစဉ်ရတယ်။(နေ့ခင်းစာအတွက်ကတော့ ချက်ရန်ပြင်ဆင်ထားတာတွေကို ကိုယ်က အပေါ်ယံ ချက်လိုက်ရုံပါဘဲ။ အမြန်ကျက် တဲ့ ဟင်းမျိုးဘဲ ချက်ရတယ်။)
ကိုယ်ရုံးမသွားခင် သူတို့လေးတွေ ဗိုက်ဝဖို့အရေးကြီးတယ်။
အကြီးမလေးလည်း မူကြိုမသွားခင် မနက်စာ ၀၀လေးကျွေးလိုက်ချင်တယ်။ သူက အစားကိုနည်းတာ။ ကိုယ်ထည့်ပေးတာလေး ကုန်အောင်စားရင်ဖြင့် ကိုယ့်မှာပီတိဖြာ ကျေနပ်လို့။
နေ့လည်စာတော့ ကျောင်းကျွေးတယ်။ အရင်လတွေက ကျောင်းမှာ နေ့လည်စာစားရင် မကုန်တော့ သူမှာ stress တွေဖြစ်လို့။ အခုရက်ပိုင်းတော့ဖြင့် ထမင်းလည်းကုန်အောင်စားနိုင်တယ်တဲ့။ သူလည်းကျောင်းပျော် ကိုယ်လည်းကျေနပ်ပေါ့။
အငယ်လေးဆိုရင်လည်း ကိုယ်ရုံးတက်ချိန်မှာ အိမ်မှာတနေကုန်ထားခဲ့ရတာ။ အဲဒီတော့ ကိုယ်မသွားခင် မနက်စာ ၀၀လေးကျွေးချင်တာ။ ကိုယ်ကျွေးတဲ့ အစားစားတဲ့ ရက်ဆိုရင် ကျေနပ်ပြီး မစားဘူးဆိုရင်တော့ ကလေးများ ဗိုက်ဆာနေမလား၊ ပိန်သွားတော့မလား စသဖြင့် တွေး စိတ်ပူနေရတာ။
ဒီမနက်လည်း ခါတိုင်းလိုဘဲ။ ၀ုန်းဒိုင်းကျဲတဲ့ မနက်ခင်းပေါ့. ကလေးနှစ်ယောက်က လွယ်လွယ်ကူကူ မနက်စာ ကျွေးလို့ရပြီး ကိုယ့်အတွက် တော့ ရုံးရောက်မှ စားပါတော့မယ်လေ ဆိုပြီး ရုံးကားမလာခင် (၁၀)မိနစ်အလိုမှာ သားလေးကို နို့တိုက်နေတာ။
အိမ်ကို ခဏ အလည်ရောက်နေတဲ့ အမေက သမီးမသွားသေးဘူးဆိုရင် အမေထမင်းလေး ပြင်ပေးမယ် စားလိုက်အုံးဆိုပြီး ကိုယ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ ပဲပြုတ်ဆီဆမ်းလေးနဲ့ ငပိကြော်လးကို ဇွန်းတပ်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ အော် အဲဒီအခါမှ အမေလည်း ထမင်းစားလေ ဆိုပြီး
ဧည့်သည်အမေကို ကိုယ်ကထမင်းကျွေးဖို့ သတိပြန်ရတယ်။ သမီးစားစား အမေပြီးမှ စားမယ် ဆိုပြီး ကိုယ်ထမင်းစားတာကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကိုယ်အမေကို ကြည့်ပြီး ၀မ်းနည်းလာတယ်။ မိဘတိုင်းဟာ ဒီလိုပါဘဲ။ ဘာမဟုတ်တဲ့ အရာလေးအတွက်တောင် သူတို့အတွက်မကြည့် ။ သားသမီးအတွက်ဘဲ ဦးစားပေးစဉ်းစားတယ်။
အမေကတော့ သမီးတို့အတွက် အရင်ကလည်း စီးဆင်းခဲ့တယ်... အခုလည်း စီးဆင်းဆဲပါ...နောင်လည်း ဆက်လက်စီးဆင်းနေအုံးမှာပါ။
ကိုယ်လည်း သားသမီးတွေအတွက် ..... ကြိုးစားရင်း
Posted by ဆန်းစနေ၀န်း at 3:38 PM No comments: Links to this post
Labels: ခံစားမိသည်များ, သူတို့အကြောင်း
ကျွန်မဘဝရဲ့ ၂၄နာရီကို ဘယ်လို အသုံးချနေသလဲဆိုတော့
၁။ ကျွန်မ ကလေးလေးတွေအတွက် အချိန်ပေးရပါတယ်။ တနေကုန်ရုံးတက်နေရတဲ့ ကျွန်မအဖို့တော့. အိမ်မှာ ရှိနေချိန်များမှာ သားနဲ့သမီးအတွက် ပေးရတဲ့အချိန်ကများပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိစေဖို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံြ့ဖိုးစေဖို့ အစစအရာရာ ဂရုစိုက်ပေးရပါတယ်။
(၁)နှစ်ခွဲအရွယ်ရှိတဲ့ သားလေးနဲ့ စကားတွေပြောပေးရတယ်။ ချော့မြူပေးရတယ်။ အတူတူ ကစားပေးရတယ်။ အစားအသောက်လေးတွေ ကိုယ်တိုင်ကျွေးမွေး ပြုစုပေးရတယ်။ သီချင်းတွေဖွင့်ပြီး အတူတူဆို အတုတူကပေးရတယ်။ အိမ်အောက်ဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်ပေးရတယ်။ (၅)နှစ်အရွယ် သမီးလေးအတွက်ကျောင်းက ပြန်လာရင် ကျောင်းကအကြောင်းလေးတွေ နားထောင်ပေးရတယ်။ အတူတူ ကစားပေးရတယ်။ စာရေးရင် ကြည့်ပေးရတယ်။ ပုံတွေဆွဲပေးရတယ်။ အေ၇ာင်တွေခြယ်တာ၊ စက္ကူတွေ ဖြတ်ညှပ်ကပ်ပေးရတယ်။ အရုပ်တွေနဲ့ ကစားပေးရတယ်။ အိပ်ရာဝင် ပုံပြင်
ပြောပြပေးရသေးတယ်။ ပိတ်ရက်ဆိုရင် သူလိုချင်တဲ့အရာလေးတွေ ဈေးလိုက်ဝယ်ပေးရတယ်။
၂။ သင့်တင့်လျောက်တဲ့ ၀င်ငွေ နဲ့ ဂုဏ်လေးတစ်ခုဖြစ်စေတဲ့ ရာထူးလေးအတွက် မနက် (၈း၃၀)ကနေ ညနေ (၅)နာရီအထိ အချိန်ပေးရုံးတက်ရသေးတယ်။
၃။ သားနဲ့ သမီးတို့ ဖေဖေအတွက် ကိုယ်တိုင်ထည့်ပေးတဲ့ ရုံးထမင်းချိုင့်လေးဖြစ်စေဖို့ မီးဖိုချောင် ခဏ ပြေးဝင်လိုက်ရသေးတယ်။ အင်္ကျီဖြူဖြူလေး သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖြစ်စေဖို့ ကိုယ်တိုင် လျှော်ဖွတ်မီးပူလေးလည်းတိုက်ပေးရသေးတယ်။ ညဘက် ညဉ့်နက်တဲ့အထိ ပုံဆွဲနေရင် တစ်ယောက်တည်း ပျင်းနေမှာစိုးလို့ အဖော်စောင့်ပေးရသေးတယ်။
၄။အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အိမ်လေးလှပနေစေဖို့ သန့်ရှင်းရေးလေးလည်း လုပ်လိုက်သေးတယ်။
၅။အပိုဝင်ငွေလေးရစေဖို့ ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ ပညာလေးအသုံးချပြီး ဒီဇိုင်းလေးတွေက ဆွဲလိုက်ရသေးတယ်။
၆။ ကိုယ့်ပညာရပ် ဆက်လက်အောင်မြင်စေဖို့ သုတေသန စာတမ်းလေးတွေရေးရ ဖတ်ရသေးတယ်။
၇။ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အချိတ်အဆက်မပြတ်စေဖို့ ဖေ့စ်ဘွတ် သုံးရသေးတယ်။
၈။ ကိုယ့်ရဲ့ ၀ါသနာလေးအတွက် ဘလောဂ့်လေးလည်းရေးရသေးတယ်။
၉။ သံသရာမှာ ကိုယ့်နောက်ပါစေဖို့ ဘုရားတရားလေးလည်း နဲနဲပါးပါးလုပ်ရသေးတယ်။
နောက်ထပ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
လောလောဆယ်တော့ မိဘတွေ အပူမပေးဘဲ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။
Posted by ဆန်းစနေ၀န်း at 3:32 PM No comments: Links to this post
ရွှေစည်းခုံစေတီ ပုဂံပြည့်ရှင် အနော်ရထာမင်း (အေဒီ ၁၀၄၄-၁၀၇၇) တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ စွယ်တြော်မတ်စေတီ (၄)ဆူထဲမှာ တစ်ဆူအပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်....